Home News RW Kheyre: “Aniga iyo Farmaajo waxaan isla joognaa waa ilaa sanadkan dabayaqadiisa,...
RW Kheyre: “Aniga iyo Farmaajo waxaan isla joognaa waa ilaa sanadkan dabayaqadiisa, la sii joogitaankiisa waxa ay caqabad ku tahay mustaqbalkeyga” (Xigasho)
Ra’isal Wasaare Xassan Cali Kheyre oo kulan albaabada u xiran yihiin la qaatay qaar ka mida ganacsatada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda beesha uu ka dhashay ayaa u sheegay in qorshahiisu yahay in horaanta sanadka danbe uu ka goosan doono MW Farmaajo isla markaana uu si gooni ah isku taagi doono. MOL ayaa fursad u heshay in ay hesho nuqulkii iyo qodobadii shirkaas looga hadlay.
RW Kheyre ayaa yiri “….mar hadii lugaha lala galo sanadka 2019, waxaa bilaabanayo ololaha doorashadda 2021, la sii joogitaanka Farmaajo waxaa ay dhaawacaysaa karamadeyda iyo fursadda aan u leeyahay in aan ku guulaysano doorashadda 2021”.
RW Kheyre ayaa sidoo kale sheegay in uu heysto lacag ku filan oo uu olole ku galo. Waxaa kaloo uu carabka uu ku dhuftay in uu jiro qorshe uu xisbi ku dhisanayo. waxa uu sheegay in ay qaban qaabada dhisida xisbiga ay mareyso meel fiican. Waxa kaloo uu u sheegay in xisbiga howshiisa uu hada hogaanka u hayo Eng Cabdi Cashuur oo hadda ah Wasiirka Wasaaradda Isgaarsiinta. RW Kheyre ayaa yiri “labo asbuuc ka hor waxaan u diray Eng. Canshuur in uu la soo kulmo qaar ka mida qurba joogta aan is leenahay xisbiga hoowshiisa waa idinka caawin karaan. Eng. Cabshuur ayaa kulmo gooni gooni h kula qaatay shaqsiyaad kale duwan Hotelka Crown Plaza ee magaalada Neyroobi isaga oo ku hadlaya magaca RW Kheyre.
Dhanka kale Ra’iisal Wasaare Kheyre ayaa sheegay in uu xiriir toos ah la sameeyay xisbiga hadda ka taliya dalka Norway ee loo yaqaano Conservative Party(Norway) Bokmål: Høyre, Nynorsk ee ay hogaamiso Ra’iisal Wasaare Erna Solberg. Waxa uu u sheegay beeshiisa in RW Ernau sheegaty in ay Somaliya dano badan ka leeyihiin sidaas darteed ay tageero buuxda siin doono xisbigiisa.
Dhanka kale RW Kheyre waxa uu carabka ku dhuftay in beesha Hawiye ayan haysanin hogaan isaga la tartami karto marka la fiirsho kuwa hadda ku ka dhex muuqada siyaasadda Somaliya. Waxa uu yiri “ ma jirto cid maqaamkeyga soo gaari karto hadda laakiin waxaa jiro rag cul-culus oo aamusan oo laga yabaabo in ay gadaal ka soo baxaan, kuwaas ayaa culayska igu keeni kara laakiin hadda dadka muuqada ma jirto cid ila tartami karto, xataa hadii aad ku darto Xassan Shiikh”
Senator Dhegdheer ayaa waydiiyay “ bal nooga waran adiga iyo saaxibkaa Fahad Yasin, waxaan mqaleynaa warar sheegaya inaad kala tagteen oo aadan wada soconina”. RW Kheyre waxa uu ku jawaabay “aniga iyo Fahad horay waan isku qabanay laakiin hadda si fiican ayaan isaga warheynaa, Fahad waa og yahay in uusan MW Farmaajo rajo lahayn in uu soo noqdo sidaas darteedna aniga iyo asaga waa wada soconaa”. Ganacsade Ismaciil Gooni ayaa waydiiyay, xisbiga aad rabtid in aad aburto isaga qeyb ma ka yahay? RW Kheyre ayaan si toos ah uga jawaabin su’aashaas, waxa uuna ku gaabsaday waan wada soconaa.
Yaxya Cali Hareere oo goob joog ka haa kulanka ayaa waxa uu warbixin ka bixiyay kulankii ay Xaaska Madaxweynaha, Zeynab Cabdi Macalin la yeelatay Xassan Macalin iyo Xuseen Macalin. Yaxya ayaa sheegay in Xuseen Macalin uu ka balan qaaday in uusan meel fagaare ah dowladda Farmaajo waxba uga sheegeynin. Yaxya waxa uu yiri “sida aad ula socotaa Xuseen waxa uu sameeystay Hay’ad Cilmi Baaris ee la xirirta Amniga waxaana warqadda ogolaasha u sameeyay wasiir Ducaale, mana filaayo in uu wax dhib ah kaaga imaan karaa hadii kale hay’adda ayaa laga xirayaa”. Ganacsade Cabdi Cali ayaa sheegay in uu la kulmay Xassan Macalin kana wadahleen in uusan isaga homaagin dagaal ka dhan ah Kheyre. Cabdi Cali ayaa yiri “ma filaayo in uu si toos ah isaga wax nooga imaanayaa laakiin xulufadda uu ka tirsan yahay ayaa isaga noo isticmaali doonto”
Dhanka kale RW ayaa muujiyay culeyska uu ka dareemayo beesha Abgaal iyo in uu ku guuldareystay in uu hantiyo kalsoonidooda. RW Kheyre ayaa yiri “sida aad la socotaan hogaanka dhaqanka beesha Abgaal ayaan u sameeyay qado si fiican ayaan u wada hadalnay waxaana ka codsaday in ay si toos ah ii taageeraan oo ay ila saftaan. Waxaan ku iri yaan la iiga hiilinin nin Mareexaan ah” RW Kheyre oo ay qoslaayo ayaa yiri “ waxaan xataa u sheegay in beesha Haber Ceyno in ay ka tirsan tahay Abgaal, oo aan nahay dad walaalo ah, isku dhaqan ah” RW Kheyre ayaa ku qarsaday beeshiisa in uu xataa gooni ula kulmay Cali Maxamed Geedi oo uu ku tilmaamay in uu yahay nin waalan. RW Kheyre ayaa sheegay in Cali Maxamed Geedi si qaasa uga codsaday in uu u aqansado in uu yahay qofka kaliya ee Abgaal arimahooda lagala tashan karo. RW ayaa yiri “ si aan buuqiisa iyo beentiisa isaga yareeyo ayaan u ku iri wixii Abgaal ku saabsan adiga ayaan kaala xiriirayaa, laakiin waad wada ogtihiin in Cali yahay nin been badan waxna aan lagu darsan karin.
Waxa muuqato in RW Kheyre doonayo in qaladadkii ka dhacay dowladda dhexdeeda uu dusha ka saaro MW Farmaajo. Qorshahiisuna waxa ay tahay in uu meel cidla ah soo istaajiyo MW Farmaajo inta aan la gaarin olalaha doorashadda. RW Kheyre ayaa dad badan u sheegay in MW Farmaajo uu yahay qof go’doon ah oo aan saaxibo laheynin, isla markaana uusan meelna ka aadin karin Isaga iyo Fahad Yasin. RW Kheyre ayaa ku faanay in MW Farmaajo aan wax talo ah gacanta ugu jitrin isla markaana uusan dagaal cad oo siyaasadeed qaadi karin ama uma usam si toosa uga horimaan karin qorshahiisa. Waxa uu yiri “Farmaajo arintiisa yeysan waqti badan naga qaadin, aniga ayaa indho u ah, talaabo uu qaadi karaana ma jirto, hadii ay Somali ogaan lahayd sida aan godka siyaasadeed habeen iyo maalin uga celceliyo waa ay ii garaabi lahayd”
Su’aashu waxa ay tahay MW Farmaajo maxaa u qorsho ah oo uu uga hortagi doonaa barnaamjika cada ee uu sameeystay RW Kheyre iyo kooxaha isaga taageersan.
Previous articleCiidamada Dowladda Oo Howlgalo Kawada Deegaano Hoostaga Gobolka Sh/hoose
Next articleQaraxyo Is Xig-xigay oo Laga Maqlay Magaalada Muqdisho Iyo Xogtii Ugu Dambeeysay!!
Gabar aan qaan-gaarin oo lagu kufsaday Mid ka mid ah Degmooyinka...
Ganacsade Soomaali ah oo lagu dilay K/afrika!!